Halloo Caddaalad Falo Kooxdii Ladagaalanka Argagixisada (Ashahaado-la-dirika)
Cabdixayi Cismaan Garaad
Nimankii Soomalidu u bixisay Ashahaada-la-dirka waxay mar ku guulaysteen in ay dhagta adduunka C/laahi wax oogu sheego maahane tan kale ayana wax ugu sheegaan. Balse waxaa la oran karaa way kaga dheereeyeen oo waa tii dawladdii oo Baydhabo iyo Jawhar fadhida, ayaga loo dirsaday inay xamar sifeeyaan kana saaraan niman“adduunku (International Community) iyo Mareykan u yaqaanaan argagixiso - kuwaasoo ka koobnaa kuwa aanay Soomalidu ogeyn jiritaankooda iyo qaar culumada dalka looyaqaan.
Kaddib markii dawladda kumeel-gaarka ah lagu soo dhisay Kenya, baarlamaankii Soomaaliya waxa uu isku khilaafay meesha dawladdu dagi doonto. Qaar uu hogaaminayey guddoomiyihii baarlamaaka jeerkaas Shariif Xasan, oo ay ka mid ahaayeen inta badan hogaamiye-kooxeedyadii Xamar, waxay arkayeen in magaalo-maddaxda, dawladdu toos u degto halkaasna ka sii waddo hawlihii loo soo igmaday oo ahaa, dib-u- heshiisiin iyo soo-celin qaran Soomaaliyeed. Dhanka kale , madexweynaha iyo wasiirkiisa kowaad iyo tiro ahaan inta badan baarlamaanka waxa ay qabeen markii danbana marsiisteen, in si kumeelgaar ah loogu sii shaqeeyo Baydhabo iyo Jawhar. Waa tii halkaas lagu kala dhaqaaqay. Kooxdii Shariifku horkacayey oo hogaamiye kooxeedyadii Xamar ka buuxaan waa tay Muqdisha madal ka yeesheen, Cabdullaahina damcay inuu go’doonsho oo uu ka yeelo niman qas iyo fawdo waxaan ahayn aan ogolayn, dan iyo xeelna ka dhigtay jid-gooyo.
Dadaal fara badan ka gadaal Cabdullaahi iyo Geeddi waxa ay ku guulaysteen in ay Shariif Xasan soo ceshadaan, kaddib heshiiskii Sanca iyo gacanmarintii Boosaaso. Shariifkuna raggii uu Xamar kaga soo tagay iyo kulama hambaasin inuu u sheego inuu ka tagay ee aayar buu Baydhabo soo xaluushay, malaha asagoo gacmuhu u buuxaan, xayn mudanayaal baarlaan ahna wata ayuu u soo cid galay Cabdullaahi iyo Geeddi.
Maalmahaas waxay ahaayeen maalmihii ugu xayraan siyaadadeed badaanaa, oo la soo gudboonaaday hogaamiye-kooxeedyadii Muqdisho iyo intii ay hogaanka u ahaayeenba. Shariif tag, Xamar isbaarooyinkii iyo kuwo kale oo hor leh ayaa hareeyey, tiro ahaana waxay noqdeen kuwa ka yar intii hore ay ku joogeen, oo Shariif Xasan kaligii iskama huleeline rag iyo culeys siyaasadeed ayuu kala tagay. Xaaladdaas adag ka gadaal, isku dayo iyo dhaqdhaqaaq dublamaasiyadeed oo faro badan kaddib waxa ay Mareykan ka iyo Aduunkuba (International community) ku qanciyeen, in ay ayagu ka muhiimsanyihiin Cabdullahi iyo dawladdiisa ku oodann Baydhabo iyo Jawhar. Ugu yaraan saraakiil CIA ah iyo Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ah ayey ku qanciyeen dooddaas. Waxaa la oran karaa waxba may qancinine waa lala soo doontay mashruuca. Waxaase hubaal ah in la isa suray danayaal kala duwan, maxsuulkuna waxaa uu ahaa in ay muddo kooban ku naalloonayeen aqoonsi siyaasadeed iyo mid adeegsi oo ay ka heleen saraakiil Mareykan ah oo sheeganayey iney horboodaan Beesha Caalamka (International Community). Taasina waxay ahayd tii sababtay in Cabdullahi iyo Geeddi si cad u cambaareeyeen Maraykanka iyo “Beesha Caalamka” (International Community) in ay ku eedeeyeen in ay gacan bidixayn ku hayaan dawladda oo aanay doonayan “dawlad Soomaliya ka hanaqaadda”.
Haddaba, saw lama oran karo taasi waxa ay ahayd libin ay mar soo hoyeen hogaamiye- kooxeedyada Muqdisho. Waxaa hubaal ah in ay is waafajiyeen dano gaar ah oo ay lahaayeen iyo tii Mareykanka oo ahayd la dagaalanka waxa ay ugu yeereen “argagixisada”.
“Guushaas” way ku naalloodeen in muddo ah, adduun iyo hanti farabadana waa ku heleen , duq Cabdulaahi iyo Geeddina waxaa la hubaa inay walwal iyo caro faro badan ku abuurtay. Waxaase hoogood galay markay maddax shabeel leefeen, oo inta har cad bannaanka soo istaageen ay yiraahdeen , waxaan sameynay isbahaysi la dagaalama waxa ay ugu yeereen “Argagixisada” iyo kuwa hooya ama qarinaya “argagixisada”.
Isla markiiba dadkii Xamar daganaa oo ay horey u daashadeen una diideen har iyo hooy oo ay hogaaminayaan culimada, ganacsatada iyo maxkamadihii maxalliga ahaa ayaa garaystay in aan middaan marnaba la daawan karin. Maantaa wixii ka danbeeyey waxaa galay malagii hogaamiye-kooxeedyada Xamar iyo kuwii Koonfurta Soomliya oo dhan.
Haddaba sida ciwaanka ku cad, waa gar, in loo caddaalad falo hogaamiyo-kooxeedyadii Muqdisha, haddii dhagaha saraakiil ka socota CIA iyo wasaaradda arrimaha dibadda Meraykunku noqoto “guul siyaasadeed”. Waana guusha ay sheegeen inay gaareen ugu yaraan Sheekh Shariif iyo afar sarkaal oo ka mid ah golihiisa .
Waxaase hubaal ah in ay muhiim tahay in la qiro guul-siyaasadeedkii hogaamiye- kooxeedyadii Muqdisho gaareen, haddii kooxda shirka Jibuuti saxiixday (ARS) guusha ugu weyn ooy soo hooyeen sida ay ayguba qireen ay tahay in ay xaqiijiyeen amba suurogal ka yeeleen “in dhagta Cabdulaahi “adduunka” wax ugu sheego maahane tan kale loo ogolaaday inay wax u sheegaan”. Waabase hadduu jiro adduun labo dhagood leh oo lakal moogaysto!
Ugu danbeyntii, haddiiba, meesha loo hayaamay ay ahayd in dhagta, Cabdulaahi haysto teeda kale la helo, ma mudnayn in wixii bur-bur dal,dad iyo duunyo lahaa aan kuweyno Shariifoow hogaankaagii, ee waxay ahayd in Maxamed Qanyare, Muuse Suudi iyo malaha Sifir la weydiiyo sida ay wax yeeleen. Waxaanse hubaa in dhagta saaraakiisha CIA , tan Ahmed Walad Cabdalla iyo tan Ethiopian-ka heliddeeda aanay halganka wax aan kala jab iyo kala shaki ahayn aanay kusoo kordhin, waana midda hadda muuqata. Waxaanse Alle ka dhawraynaa in safafka Xabashida kasoo horjeeda oo gudaha ka halgamaya ka ilaaliyo kala jab iyo khilaaf inatba. Waxaan hubaa inaan labo isku diidaneyn in dhegta “Beesha caalamka” (International Community) iyo Mareykanka maanta kutaal inay tahay tii sanad ka hor kutiillay. Haddaba Shariif Axmed iyo raggiisa waxaa marti loogu yahay inay Soomali ku qanciyeen in guusha ay sheeganayaan ka duwan tahay tii Maxemed Qanyare iyo Xaaji Muuse Suudi hanteen kal hore deedna ku hungoobeen oo ku hoogeen.
Faafin: SomaliTalk.com | August 1, 2008